Barbell squats - Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezvavo | Bezzia
Unoita mabarbell squats here? Kana usati wasarudza zano rakadai, uchiri nenguva nekuti pasina mubvunzo uchazowana mibairo mikuru. Isu tinoziva kuti squats anogara ari chikamu chechero kudzidziswa kwakakosha munyu, kunze kwekuve akasiyana kwazvo, hatife takaneta nawo
Naizvozvo, nhasi tasiiwa neavo vanoshandisa bhawa uye nekudaro, ivo vanotipawo mikana isingaperi yaunofanirwa kuziva. Kutanga iwe uchaona ndidzo nzvimbo dzinonyanya kushandiswa neichi chiitiko uye nemabatiro aunofanira kuzviita nemazvo. Takatanga!
1 Chii chinonzi barbell squats chinoshanda
2 Zvikanganiso zvakakosha zvatinofanira kugadzirisa
3 Ndeipi nzira yakanakisa yekusvirana nebarbhera
Chii chinonzi barbell squats chinoshanda
Chekutanga pane zvese kana zvasvika pakuita squat, ndeipi tichave tichishanda kubva paminiti imwe maquadriceps. Kunyangwe ichokwadi kuti iro repazasi muviri ndomumwe wevamiriri vevazhinji. Zvisinei, izvi ndezvechokwadi kuti vanhu vazhinji vanotenda kuti chingori chiitiko chekurovedza makumbo kwete. Isu tatoona kuti kuwedzera kune ino nzvimbo iyo lumbar uye kumashure vanobatanidzwawo zvakanyanya. Neiyi nzira, isu tinofanirwa kugara tichiita zvakanaka kuuraya kuti tikwanise kunakidzwa nenzira kwayo. Ndosaka tichigona kuwedzera kuti sekondari zvakare inosanganisira mhasuru dzekuseri kwezvidya kana vanobvuta uye vadumbu.
Zvikanganiso zvakakosha zvatinofanira kugadzirisa
Imwe yemhosho yatinofanirwa kugara tichidzivisa pakuita squats kuunza hunde kumberi. Dzimwe nguva, nekuda kwebhawa, tinoita kuti mapendekete afambire mberi, izvo zvinogona kureva kuti musana hausi panzvimbo yayo yepamusoro. Saka isu tinofanirwa kuenda pasi takatwasuka musana tisina kumbomisa arch. Ehezve, kana uchidzika pasi iwo mabvi haapfuuri iwo mazano etsoka. Zvakare haufanire kuunza mabvi ako pamwechete kana uchidzika uye kunyangwe zvishoma kana uchikwira. Sezvo iri imwe yemhosho dzinowanzoitika uye kuti isu tinofanirwa kudzivirira pane zvese mutengo kuti tishandise nenzira kwayo kudzidziswa kwedu uye kuti muviri wedu unogara wakangwarira.
Chinhu chakakoshawo inyaya yekudzika pachako. Vamwe vanhu havaendi zvakadzika zvakakwana uye vamwe vanodzikira zvakanyanya. Nekudaro, iwe unogara uchifanira kuramba uchichengetedza zvine hunyanzvi nzira Tsandanyama activation inogona kukanganiswa mune ino maitiro, saka kana iwe uri wekutanga zvinogara zviri nani kuti usatakure huremu hwakawandisa. Kana uchidzikisa zvidya zvinofanirwa kunge zvakafanana nepasi. Nenzira iyi iwe unoziva kuti kubwinya kuri kutotanga kuita basa ravo, pasina kukanganwa iyo quadriceps nevamwe.
Ndeipi nzira yakanakisa yekusvirana nebarbhera
Mushure mekuona zvikanganiso, isu tave pachena kuti isu tinofanirwa kubheja pane chaipo kufamba uye kusiya kumashure ese marudzi ekusahadzika. Neichi chikonzero, kuti uite nzira yakanaka, inounza pamwechete nhanho dzakasiyana, yakapusa mune chero mamiriro, asi ichinyatso kubatsira pamwe nekugona:
Tinosimuka takabata bhara zvakasimba nemaoko maviri. Kurema kwayo kunofanirawo kuva pakati nepakati kuitira kuti tikwanise kufamba nemazvo.
Ose mabvi netsoka hazvivhure zvakawandisa asi munzvimbo yakasununguka uye zvakasikwa, kudzivirira kusagadzikana munzvimbo mbiri idzi.
Iwe uchaenda pasi izvo zvinochengeta musana wako wakatwasuka, pasina kuvhima kumberi nemapfudzi ako.
Rangarira kuti mabvi haafanire kubata kana kusvika padhuze. Saka tinofanira kuita yakachena uye pasi kufamba. Kudzivirira kumanikidza mafambiro uye kwete chete emabvi, asiwo emakumbo ayo asingafanire kukombama chero nguva.
Zvino iwe unoziva zvishoma zvishoma, imwe yeakanyanya kurovedza iwe aunogona kuisa mukuita nenzira yakapusa. Kugara uchichinjisa kune zvako zvaunoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Exercise » Barbell squats